musha Blog Nzira dzekuchengetedza dzemagetsi mota yemabhasikoro
Zuva ： 2021-07-29 Zvikamu:Blog Views: 1,307 maonero
Kune zvikamu zvina zvakakosha zvebhasikoro remagetsi: mota, bhatiri, controller, uyejaja. Ivo vagara vachitorwa seyakakosha yezvinhu zvehutano uye hutano hwemabhasikoro emagetsi, uye kukosha kwavo kuri pachena.
Pakati pavo, mota ishanduro yemagetsi yebhasikoro remagetsi, iro rinoshandura simba remagetsi bhatiri kuita simba remagetsi uye rinotyaira kutenderera kwemavhiri emagetsi, ayo akaenzana neinjini yemota. Iwe unofanirwa kutarisira zvakanaka mota paunenge wakakwira, kuitira kuti mota yako igone kukutakura zvirinani. Nhasi, ini ndichakuudza nezvekuchengetedza uye matanho eiyo mota yemagetsi yebhasikoro!
1. Maseketi ese nekubatana kwemagetsi emagetsi emagetsi emabhasikoro zvakagadzirwa uye zvinogadzirwa pasi pekutungamira kwehunyanzvi. Vashandisi havafanirwe kuzvishandura, zvikasadaro kukundikana uye tsaona (kusanganisira zvakakomba senge moto uye tsaona dzemumigwagwa) zvinogona kuitika.
2. Paunenge uchishandisa mumazuva ekunaya, usarega mota ichityaira mumvura yakadzika, ndoda kurega nzvimbo yemvura ichidarika chinzvimbo chepashure vhiri repakati axis; panguva yekushandisa kwako, teerera kuti utarise mamiriro ekumisikidza mota uye forogo yepamberi, kana iwe ukaona kuti iyo nzungu yakasununguka, sunga nenguva kana kuenda kunochengetera kuti utarise nekugadzirisa nayo.
3. Kana mota ichipisa (inopfuura 90 ° C), ichipfungaira, kunhuwirira, ruzha rwusina kujairika kana zvimwe zvisina kumira mushe, misa oparesheni nekukasira uye uitumire kuchitoro chakakosha pakurapwa. Usatsemura mota wega.
4. Dzivisa kutyaira mabhasikoro emagetsi uchizadza zvakawandisa, kusakwanira kumanikidzwa kwetaya, kana kumateru marefu nemawere, zvikasadaro mota inogona kutsva.
5. Magetsi emagetsi haafanire kuitirwa mhirizhonga, uye bhasikoro remagetsi harifanirwe kumanikidzwa kutanga kana ravharika. Kana bhasikoro remagetsi risingakwanise kutanga nekuda kwekuvhiringidzwa, usatange kudzokorora, uye tangisa mota mushure mekubvisa chikonzero chekukanganisa bhasikoro remagetsi.
6. Kune avo vakapakata mota dzemaketani, yeuka kugara uchiwedzera mafuta ekuzora kuketani. Izvi hazvigone chete kudzora kupfeka kwezvikamu zvekutapurirana, kuwedzera hupenyu hwavo, asiwo kudzikisira ruzha rwekutapurirana.
1. Paunenge uchishandisa bhasikoro remagetsi, kazhinji haudi kuchengetedza nekuchengetedza zvikamu zvemukati zvemota. Iwe unongoda kutarisisa kutarisa mamiriro ezvisungo zvemagetsi emagetsi emagetsi akaiswa pane forogo yekumashure. Kana iwe ukawana chero nzungu dzakasununguka, iwe unofanirwa kukurumidza simbisa iyo nati kana kukumbira nyanzvi kuti iongorore uye ibate nayo.
2. Kana mota yamira kumhanya, bvisa guruva uye sludge kubva mumota munguva, chengeta mota yakachena kudzivirira mafuta nemvura kupinda mumota, uye usasase wakananga nemvura kana uchichenesa.
3. Tarisa kuti waya inotungamira yemota yatsva here uye kana paine ruzha rwusina kujairika kana mota ichimhanya. Kana zvichidikanwa, tumira kuchitoro kunorapwa, uye bvunza nyanzvi kuti itarise uye ibate nayo.
4. Kana paine cheni mota, cheni inofanirwa kuzadzwa nemafuta ekuzora nguva dzose.
Muchidimbu, isu tinofanirwa kutarisira zvakanaka mota yemagetsi yebhasikoro, kuitira kuti iyo motokari mabhasikoro inogona kugara kwenguva refu.
Tags:mota yemagetsi yebhasikoro
Prev: 8 poindi ekuchengetedza emagetsi emabhasikoro emagetsi
Next: Nhoroondo yekuvandudza yemabhasikoro emagetsi